2 Samuel 20 AKCB - Matteus 20 LB
1Ɔtɔkwapɛfo bi a na wɔfrɛ no Seba na ɔyɛ Bikri a ofi Benyamin babarima, hyɛn torobɛnto teɛɛ mu se,
“Yɛne Dawid nni hwee yɛ.
Yenni agyapade biara wɔ Yisai babarima no nkyɛn. Israel mmarima,
mommra na yɛn nyinaa nkɔ yɛn kurom!”
2Enti Israel mmarima gyaw Dawid hɔ, kodii Seba akyi. Nanso Yuda mmarima no de, wɔtenaa wɔn hene nkyɛn, na wɔwowaw no fi Asubɔnten Yordan ho, kosii Yerusalem.
3Bere a oduu nʼahemfi hɔ wɔ Yerusalem no, ɔhyɛɛ sɛ ne mpenanom du a ogyaw wɔn hɔ no, wɔmfa wɔn nkɔhyɛ kokoa mu baabi. Na ɛsɛ sɛ wɔma wɔn wɔn ahiade nyinaa, nanso ɔne wɔn renna bio. Enti wɔn mu biara tenaa ase sɛ okunafo, kosii ne wuda.
4Ɔhene no hyɛɛ Amasa sɛ ɔmfa nnansa mmoaboa Yuda asraafo ano, na ɔmmɛka biribi nkyerɛ no saa bere no mu. 5Enti Amasa kɔbɔɔ asraafo no amanneɛ, nanso nʼahoboa no boroo nnansa no.
6Na Dawid ka kyerɛɛ Abisai se, “Saa ɔtɔkwapɛfo Seba no rebɛhaw yɛn asen sɛ nea Absalom haw yɛn no. Fa mʼakofo no, na taa no ansa na waguan akɔbɔ ne ho aguaa wɔ hintabea nkurow no mu baabi a yɛn nsa renka no.” 7Enti Abisai ne Yoab yiyii awɛmfo a wodi mu fii Yoab asraafo ne ɔhene no ankasa de mu de tiw Seba.
8Na woduu Gibeon ɔbo kɛse no ho no, Amasa hyiaa wɔn. Na Yoab hyɛ nʼakotade a ɔde afoa abɔ nʼataaso. Otuu nten kɔɔ nʼanim sɛ ɔrekokyia Amasa no, afoa no fii boha no mu tɔɔ fam. 9Yoab bisaa no se, “Me nua, wo ho te dɛn?” Ɛhɔ ara na Yoab de ne nsa nifa soo nʼabogyesɛ mu, sɛ nea ɔrefew nʼano. 10Amasa anhu sɛ afoa no hyɛ ne nsa benkum mu. Na Yoab de afoa no wɔɔ ne yam, maa ne nsono tu guu fam. Ɛho anhia sɛ Yoab betia ne so koraa, na Amasa wui. Yoab ne ne nuabarima Abisai gyaw no hɔ, toaa so tiw Bikri babarima Seba.
11Yoab asraafo no mu aberante a ɔyɛ panyin wɔ nsraadɔm no so no mu baako teɛɛ mu kyerɛɛ Amasa asraafo no se, “Obiara a ɔtaa Yoab akyi ne obiara a ɔwɔ Dawid afa no, ommedi Yoab akyi.” 12Amasa daa ne mogyabura mu wɔ ɔkwan no mfimfini. Na ɔbarima no huu sɛ asraafo no adu hɔ a wɔagyina rehwɛ Amasa no, ɔtwee no fii ɔkwan no mu, de no too wuram, de atade kataa ne so. 13Woyii Amasa fii ɔkwan no mu akyi no, mmarima no nyinaa dii Yoab akyi sɛ wɔrekɔkyere Bikri babarima Seba.
14Saa bere no, Seba kyinii Israel nyinaa boaboaa ne fifo Bikrifo ano wɔ Abel-Bet-Maaka. 15Yoab asraafo no duu hɔ no, wɔtow hyɛɛ Abel-Bet-Maaka so. Wosisii mpie wɔ kurow no akyi, de bɔɔ wɔn ho ban fii atamfo ho na wɔpempem afasu no, pɛɛ sɛ wodwiriw gu. 16Na ɔbea nyansafo bi teɛɛ mu fi kurow no mu se, “Muntie! Muntie! Monka nkyerɛ Yoab se ɔmmra ha, na menka asɛm bi nkyerɛ no.” 17Yoab kɔɔ ne nkyɛn, na obisaa no se, “Wo na wɔfrɛ wo Yoab no?”
Obuae se, “Yiw.”
Ɔkae se, “Tie asɛm a wʼafenaa pɛ sɛ ɔka no.”
Obuae se, “Meretie.”
18Ɔkae se, “Tete no, na yɛka se, ‘Yɛrekɔpɛ afotu wɔ Abel.’ 19Yɛpɛ asomdwoe ne nokware wɔ Israel. Wopɛ sɛ wosɛe kurow a adi nokware wɔ Israel. Adɛn nti na wopɛ sɛ wosɛe ade a ɛyɛ Awurade dea?”
20Yoab buae se, “Ɛnyɛ sɛ mepɛ sɛ mesɛe wo kuropɔn. 21Nea merehwehwɛ no ara ne ɔbarima bi a ne din de Seba a ɔyɛ Bikri babarima a ofi Efraim bepɔw so, na wama ne ho so atia ɔhene, ɔhene Dawid. Fa saa ɔbarima no bra, na mefi kurow no mu.”
Ɔbea no ka kyerɛɛ Yoab se, “Wɔbɛtow ne ti afi ɔfasu no so ama wo.”
22Afei, ɔbea no kɔkaa nʼafotu pa no kyerɛɛ nnipa no nyinaa. Na wotwaa Bikri babarima Seba ti, tow maa Yoab. Enti ɔhyɛn torobɛnto maa ne mmarima no bɔ hwetee, maa obiara kɔɔ ne fi. Na Yoab san kɔɔ ɔhene nkyɛn wɔ Yerusalem.
23Yoab bɛyɛɛ Dawid asraafo no so sahene bio.
Na Yehoiada babarima Benaia nso yɛ ɔhene bammɔfo so panyin.
24Adoram na na ɔhwɛ adwumayɛfo so,
na Yehosafat a ɔyɛ Ahilud babarima no kyerɛw ahemfo ho abakɔsɛm.
25Na Sewa yɛ asennii kyerɛwfo.
Na Sadok ne Abiatar nso yɛ asɔfo.
26Ɛnna Yairini Ira nso yɛ Dawid sɔfo.
AKCB : 2 Samuel 20